Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Croatian Maslina Resort na-ekwuputa onye njikwa ụlọ nkwari akụ ọhụụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Croatia na -agbasa ozi ọma • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọnye na -bụ Giuseppe Nardiello?
Ebe ezumike Maslina, ihe ohuru ohuru nke Relais & Chateaux nwere nke ọma na isi ya, mepee na August 2020 nwere obi ụtọ ịkpọsa na a họpụtara Mr Giuseppe Nardiello ka ọ bụrụ Onye njikwa Hotel.
Mazị Nardiello malitere ọrụ ya n'ụlọ ọrụ ile ọbịa mgbe ọ dị obere afọ 15 wee wuchaa ọmụmụ ihe banyere ụlọ oriri na nkwari akụ ya na Sorrento, Italy. N'oge ọrụ ile ọbịa dị ukwuu, Mr Nardiello ejiriwo ọtụtụ ndị isi njikwa n'ọtụtụ họtel wee nweta ahụmịhe mba ụwa na London, Italy, Germany, France na Croatia. Ọ rụworo ọrụ maka ọtụtụ ụlọ nkwari akụ mba ụwa, gụnyere Hilton na Le Meridien. Tupu ọ banye na Maslina Resort, Mazi Nardiello nwere ọnọdụ nke Onye Ọrụ Rooms Division Manager na DoubleTree nke Hilton, Venice, Italytali.
Mazi Nardiello egosiputala onye ndu di nma na oru oma nke oma n’oru ndi o jigoro na mbu nke gunyere nhazi nke ulo oru n’ihu, nhazi nkewa ulo na otu afo dika onye ndu obibi na Lafodia Sea Resort na Lopud, Croatia. Site na ọrụ ya ogologo oge na ụlọ ọrụ ile ọbịa na ihe ọmụma dị ukwuu banyere okomoko na ụdị ndị a ma ama na mba ụwa, Mr Nardiello ga-eweta ọtụtụ ahụmịhe na Maslina Resort.
“Ana m atụ anya na ọrụ m dị ka onye njikwa ụlọ oriri na ọ Hotelụ atụ na Maslina Resort. Oge ndị a siri ike maka ụlọ ọrụ ile ọbịa. Isi nke Maslina Resort bu aru ike, obi di mu uto na mu so na ndi otu di egwu. Ihe niile na-amalite site na ndị otu ziri ezi na ndị ziri ezi. Ndị mmadụ nọ n'isi ụlọ ọrụ ile ọbịa ma anyị ejiri nlezianya họrọ otu ndị na-arụsi ọrụ ike, nwee mmụọ na mmekọrịta enyi. Ana m atụ anya ị nabata ndị ọbịa mbụ anyị n'ọnwa Ọgọst ma bụrụ akụkụ nke ụdị echiche a pụrụ iche ma na-akpali akpali. ” Enthuses Mr Giuseppe Nardiello, onye njikwa ụlọ oriri na ọ Hotelụ ofụ nke Maslina Resort.
Onye mara mma, nke nwere okpukpu ise Maslina Resort na agwaetiti Croatian nke Hvar dị n'akụkụ otu n'ime obodo ndị kacha ochie na Eastern Adriatic, Stari Grad. Ihe onwunwe Relais & Chateaux, Maslina Resort ga-emeghe na Maslinica Bay na August 2020.